GNU HEALTH: ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစပိုင်းအတွက် patch အသစ် ၃.၆.၂ နှင့်အတူ။ Linux မှ
GNU HEALTH: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုစတင်ရန်အသစ်သော patch 3.6.2 နှင့်အတူ
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်က၊ «GNU Health», ဂေဟစနစ်၏လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် system ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ «GNU/Linux» ကျန်းမာရေးကဏ္အတွက်။ ခေါ်ဆောင်းပါး၌တည်၏ "GNU / ကျန်းမာရေး - လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောကျန်းမာရေးအတွက်စနစ်များ", ကျနော်တို့ကအလွန်ယေဘုယျလမ်းအတွက်ရည်ညွှန်း, ဒါကြောင့်ဒီထုတ်ဝေအတွက်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေအနည်းငယ်ပိုပြီးအသေးစိတ်သို့သွားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် «GNU Health» အရမ်းကောင်းတယ် «Sistema Libre de Gestión Hospitalaria y Salud»။ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင်ဤစနစ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထူးချွန်သောတိုးတက်မှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းပညာတိုးတက်စေရန်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည် «Software Libre y de Código Abierto» နှင့်ဂေဟစနစ် «GNU/Linux».
ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်သတိပြုသင့်ပါတယ် «Software Libre y de Código Abierto» လူများစု၏အကျိုးအတွက်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ကိုအခြေခံသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အကူအညီဖြင့်ထိုက်သင့်သည် ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ငွေကြေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.
"ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူသားဝါဒမရှိဘဲဆေးပညာကိုကျင့်သုံးရန်မထိုက်တန်"။ | ပါမောက္ခဒေါက်တာRené Favaloro
၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကျန်းမာရေးစင်တာများနှင့်ဆေးပညာနှင့်ဆက်နွယ်သောဝန်ထမ်းများအားဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်သည် ဆေးရုံသတင်းအချက်အလက် ဆက်စပ်မှု ကျန်းမာရေးစင်တာဥပမာ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများနှင့်သူတို့လုပ်ဆောင်သောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ။
ပြီးတော့တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း «Software Libre y de Código Abierto», တစ်လမ်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် အခမဲ့ မည်သည့်ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်မဆို၎င်းအရွယ်အစား၊ အထူးသီးခြားမှုရှိပါစေ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဘက်စုံသုံးခြင်းနှင့် Cross- ပလက်ဖောင်းစွမ်းရည်.
1 GNU HEALTH - ဆေးရုံနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခမဲ့စနစ်
1.1 GNU ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်။ အဖြစ်မှန်
GNU HEALTH - ဆေးရုံနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခမဲ့စနစ်
GNU ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်။ အဖြစ်မှန်
ဖန်တီးမှုရက်စွဲ - ၂၀၀၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် Proyecto Medical အမည်ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည် နှင့်ဇွန်လ 12, 2011 တွင် GNU ကျန်းမာရေးနာမကိုအမှီအောက်မှာ။
စီမံကိန်း၏မဟာမိတ်များ - Thymbra ကုမ္ပဏီ, GNU ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, GNU Solidario အဖွဲ့အစည်း, ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ် နှင့် အခမဲ့ဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း (FSF).
ဆုများ: အပြောင်းအလဲအရှိဆုံးလွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားတွင်ဒုတိယနှင့်တိုးတက်မှုအလားအလာရှိသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအမျိုးအစားတွင်နဝမနေရာမှ Web Portal Programs မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆု။ သူလည်းရတယ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် FSF ၏လူမှုအကျိုးခံစားခွင့်စီမံကိန်းများအတွက်ဆု နှင့် GNU Solidario အဖွဲ့အစည်းမှလူမှုဆေးပညာဆု။
ဖွံ့ဖြိုးမှုအစိတ်အပိုင်းများ: ၎င်းသည်အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒေတာဘေ့စ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ Python, PostgreSQL နှင့် Tryton။ ဗားရှင်း ၃.၄ အရ၎င်းကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းတင်ဒေတာဘေ့စ်များကိုလည်းအသုံးပြုသည် MongoDB.
Patch (update) ၃.၆.၂ သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဆုံးမှရက်သတ္တပတ်များကိုကိုယ်စားပြုသည့်အခါသားဖွားသမိုင်း (OBS command) တွင်ပြanနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
Patch (update) 3.6.1 သည်အဓိကအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွက်ချက်မှုတွင်အမှားအယွင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် GNU ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသို့လည်းအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
ဖြန့်ချိသောဗားရှင်း 3.6.0 သည်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အောက်ပါစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
GNU Health Client နှင့် Server နှစ်ခုစလုံးသည်ယခု Python3 တွင်ရှိသည်။
ယခု GNU Health server သည် Tryton 5.0 LTS kernel ကိုအသုံးပြုသည်။
သုံးစွဲသူသည် Tryton GTK 5.2 သုံးစွဲသူအပေါ်အခြေခံသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် OpenCV နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကင်မရာပလပ်အင်
GNU Health client သည်ယခုအချိန်တွင် GI ကိုအသုံးပြုပြီး pygtkcompat ကိုအစားထိုးလိုက်သည်။
Wikibooks ရှိ GNU ကျန်းမာရေး (စပိန်ဘာသာဖြင့်)
Savannah ရှိ GNU ကျန်းမာရေး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
မှတ်စု: ဤဆိုဒ်များသည်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည် «GNU Health» ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း (အသုံးပြုရန်) အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားလုံးတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ် ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကြောင်း «Sistema Libre de Gestión Hospitalaria y Salud» ကိုခေါ် «GNU Health» အခုကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်တစ်ခုကို update ကို, နံပါတ်ဆောင်တတ်၏ «3.6.2» ဒီနှစ်အတွက် 2020၎င်းကိုကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လူအများအကျိုးရှိစေရေးအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကိုပိုမိုသိရှိစေပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ «Software Libre y de Código Abierto» နှင့်ဂေဟစနစ် «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GNU HEALTH: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုစတင်ရန်အသစ်သော patch 3.6.2 နှင့်အတူ
Tor ကွန်ယက် ၀.၄.၂.၅ ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
qBittorrent 4.2.0 ဗားရှင်းအသစ်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်